I-235KGS Baling Wire, China 235KGS Baling Wire Manufacturers, abahlinzeki, Ifektri - Ningbo Judin Special Monofilament Co., Ltd
I-235KGS Baling Wire
Ubude ikhoyili ngayinye: 13 000m
Ubukhulu beroli: φ 1100 x 430mm
Ubude ngekhoyili ngayinye: 13000 m
Kunikezwe ngama-reels angu-13000 Meter, anesisindo esingu-235 kg kuphela, okulingana cishe no-750 kg wensimbi yensimbi. Ngakho-ke lapho ifakwa ku-RDF / SRF Baler amafreyimu okuphathelene nokuphathelene (atholakala uku-oda) ukuphathwa nokongiwa kwabasebenzi okuthathwe ukushintshanisa ama-Reels kuncishiswe kakhulu, okuwinzuzo kuma-opharetha.
I-Reel ngayinye ngokujwayelekile izokhiqiza amabhele angu-2800 (ngokuya ngosayizi we-bale ka-1.2m X 1m X 1m) futhi izokonga isikhathi esiningi semisebenzi. I-Judin Plastic Wire inobunzima bokubhodloza obulingana nocingo lwensimbi oluqinile futhi luzinzile / luqinile ekusetshenzisweni.
Utshani Bokusika Umshini Wotshani Ojikelezayo Wokulungisa Umugqa